Iyiphi indlela efanelekileyo yokuvavanya nokudala i-backlink nge-SEO zixhobo?
Akukho mfuneko yokuthetha ukuba ibaluleke ngaphezu kokubambisana ne-spring-clean in website yakho okanye ixesha lebhulogi. Yaye kunye neprofayili yakho yeyona nkcukacha yinto emele yenziwe ngononophelo olukhethekileyo. Ndiyathetha ukuba ukubeka iliso elichanekileyo rhoqo xa udala i-backlinks kunye nezixhobo zokuhlola i-intanethi kufuneka zibe nguFUNA yakho kwisicwangciso sakho sokuphumelela kwexesha elide. Ewe, ukuba awufuni ukulahlekelwa ngumlawuli kwaye uphukise inkqubela yakho yangoku kwi-SEO kunye ne-backlinks ezingekho phantsi kweengxaki ezibonakalisa ziyingozi.
Masibhekane nalo - ukubeka iliso kwiphrofayili yakho yekhonkco ngesandla kuya kuhlala kusetyenziswe ixesha elide kunye nolawulo olunzima kakhulu, ubuncinci ngokuma rhoqo. Nanku xa uza kuhlangabezana nesidingo esinzulu sokwenza le nkqubo ibe yinkqubo ngokuzenzekelayo usebenzisa izixhobo zokusebenza ezicwangcisiweyo zokuhlaziya. Ukuqwalasela ukuba ezininzi zazo zifumaneka ekufikeleleni okuvulekileyo, mhlawumbi lixesha lokuba uhlalutye iphrofayili yakho yekhonkco kwaye uhlambulule umonakalo. Kwaye kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo zokukunceda ukuba ungayenzi nje kuphela i-backlink ngezixhobo zokuzenzekelayo kwi-intanethi, kodwa sebenzisa uhlalutyo olupheleleyo ngokubanzi ngokusebenza kwakho jikelele kwe-SEO, kunye nenkqubela yakho yangoku kwiziko loqhagamshelwano kwisikali.
Ziziphi iinzuzo eziphambili zokuqhuba uhlalutyo lwe-SEO olunzulu xa udala i-backlink nge-intanethi ithuluzi? Ngokucacileyo, uya kukwazi ukuphindaphinda umphumo we-backlink nganye ebeka kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi, kunye nokusebenza kwazo ngokubanzi kwi-SEO enokuphindwa kabini okanye mhlawumbi kabini. Ngokubalulekileyo, kutheni ufanele uphelelwe ithuba elinjalo? Zive ukhululekile ukulungelelanisa yonke into ngendlela efanelekileyo usebenzisa izixhobo zokutshintshela ikhonkco ezifanelekileyo - kwaye wenze izinto zibe lula.
Ngokwam, ndandisoloko ndisebenzisa uphando ngezona zinto zenzeke ngokukhawuleza kwindlela yokuzakhela iinqununu zamakhredithi zam niche ukudala i-backlink ekuqhubeni ukuqhubela phambili kwi-intanethi kwindlela enokwenzeka ngayo. Enyanisweni, ndasebenza ngokuqhubekayo ngokwaneleyo ukufumana ukukhula okubonakalayo kwi-traffic web, kunye nokuzuza ngokukhawuleza kwiphepha lam PageRank. Ngokuqinisekileyo, namhlanje kukho ukufumaneka okukhulu kwesoftware yesakhiwo soqhagamshelwano eyahlukeneyo ukudala i-backlink kunye nezixhobo zokuhlola i-intanethi ukujongana nokuhlola okuqhubekayo.
Ngaphandle kokuba ndibe neprofayili yam intanethi elinganiselwe kwinqanaba, ngokusebenza kwayo jikelele kwi-SEO, kwaye yonke i-shred ye-backlink metrics - i-rankings yosesho yam yewebhu ayiyi kuze iqhube phambili, ndimele ndivume. Ukuqwalasela izisombululo ezifanelekileyo zokuqhagamshelana kwezakhiwo, ukucwaninga, ukuhlalutya kunye nokucebisa ngokukhawuleza, ndincoma ukuzama izixhobo ezilandelayo: I-Google Webmaster Tools (epheleleyo izixhumanisi ezintsha, ezikhululekile kunye nokusebenza ngokufanelekileyo), ii-Ahrefs (uphando olubanzi lweekhonkco ezingenayo / eziphumayo + ibhonasi yokuhlawula ikhonkco), iSemalt Analyzer (uvimba olubanzi lweenkcukacha, ukuhlaziywa kwenkcazo yefayile ye-link), i-SemRush (uvavanyo kunye nokuqonda okukhuphisanayo, inguqu epheleleyo ye-fat fat). Kwaye ungasebenzisa nezinye izixhobo ezifana ne-Open Site Explorer (Moz), okanye i-Screaming Frog SEO Spider (ngelanga ndingenalo ithuba lokuzama ukusebenzisa ngokuqhelekileyo). Emva kwakho konke, kukuphela kwakho ukugqiba Source .